ဘယျတော့မှမအိုတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျအကွောငျး ခြီးမှမျးပွောပွလာတဲ့ မသေနျးနု(ခတျေသဈ ဓာတုကလြာ ဆိုရငျလဲ မှားမယျမထငျဘူးနျော) – All Update News
ဘယ်တော့မှမအိုတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်အကြောင်း ချီးမွမ်းပြောပြလာတဲ့ မေသန်းနု
အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ဖြစ်သန်းကာ နှစ်ကာလရှည်ကြာအောင် ဂုဏ်အရှိန်မမှေးမှိန်သွားဘဲ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအနေ ရပ်တည်နေနိုင်ဖို့ဆိုတာ တကယ့်ကို မလွယ်ပါဘူးနော်။နှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်မှုသရဖူ ဆောင်းနိုင်သူတွေ ဟာ လက်ချိုးရေ လို့ရတဲ့အရေအတွက်သာ ရှိနေခဲ့ပြီး ထိုသူတွေထဲမှာတော့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီများရှင် မင်းသမီးချောကြီး မေသန်းနုဟာ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။
မဆင့်(ခ)မေသန်းနုဟာဆိုရင် ငယ်ရွယ်နုပျိုစဉ် အခါတုန်းကလည်း ချောမောလှပတဲ့ ရုပ်ရည်လေးနဲ့အညီ မင်းသမီးခန်းတွေမှာ ပီပြင်စွာသရုပ် ဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ အခါမှာလည်းအမေခန်းတွေမှာပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဖော်နိုင်ခဲ့လို့ အကယ်ဒမီများရှင် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ထူးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်လာခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာမယ်ဆိုရင် ငြင်းဆိုမယ့်သူ မရှိလောက်ပါဘူးနော်။
ပြီးခဲ့နှစ်တွေတုန်းက လူမှုရေး ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စများနဲ့ရှုပ်ထွေးကာ ခက်ခဲခဲ့ရတဲ့ မေသန်းနုဟာ ယခုအခါမှာတော့ “ရွှေဆင့်”ဆိုတဲ့အမည်တံဆိပ်နဲ့ မြိတ်ဒေသထွက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင် ဖွင့်လှစ်ကာ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက် ရှိပါတယ်။
ယနေ့မှာတော့ ရုပ်ရည်ချောမောလှပလွန်းပါတယ် ဆိုတဲ့အကယ်ဒမီများရှင် မေသန်းနုကိုယ်တိုင်က “ဘယ်တော့မှ မအိုသော မင်းသ မီး”ဆိုပြီး နာမည်ကြီး မင်းသမီးတစ်လက်ကို ချီးမွမ်းပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။
မေသန်းနုကိုယ်တိုင်က အရွယ်တင်လွန်းတယ်လို့ ဖွင့်ဟချီးမွမ်း လာရတဲ့ မင်းသမီးဟာ ဘယ်သူဖြစ်မလဲပရိသတ်ကြီး စိတ်ဝင်စားကာ သိချင်နေမိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
သူကတော့ ပရိသတ်ရဲ့ အချစ်တော် အသည်းစွဲ မင်းသမီးချောတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပြီးသူမဟာ မည်သို့သောဇာတ်ရုပ်ကိုမဆို ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကာ အထူးသဖြင့်ပရိသတ်တွေ ပို၍ သတိထားသဘောကျ နှစ်ခြိုက်ရသော သူမနဲ့အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်လွန်းသော ဇာတ်ရုပ်ကတော့ ခပ်စွာစွာ ခပ်သွက်သွက် ရှပ်ပြာပြာပုံစံဇာတ်ရုပ်မျိုးဖြစ်ပြီးထိုဇာတ်ရုပ်မျိုးမှာတော့ ပြိုင်ဖက်မရှိ တဖက်ကမ်းခတ်သူတော်လွန်းတဲ့ဝါရင့်မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ပရိသတ်ကြီး ဒီလောက်ဆိုရင် ခန့်မှန်းသိ ရှိ လောက်ပြီး ထင်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲက အဖြေနဲ့ မေသန်းနုပြောတဲ့ မအိုသောမင်းသမီး ထပ်တူကျကျ မကျ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ဟုတ်ပါတယ်..မဆင့်ရည်ညွှန်းပြောဆိုလာတဲ့ မင်းသမီးကတော့မခိုင်လေး ခေါ် ခိုင်သင်းကြည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တို့ရဲ့အသည်းကျော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ခိုင်သင်းကြည်ဟာဆိုရင်လည်းဆယ်စုနှစ်၂ခုစာမက သရုပ်ဆောင်လောကမှာ ဖြတ်သန်းအောင်မြင် လာခဲ့သော မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ကာ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း စွယ်စုံပိုင်နိုင်သူ ဖြစ်သဖြင့် အကယ်ဒမီဆုတွေ ထိုက်တန်စွာ သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့အနုပညာ ဖြတ်သန်းမှုကာလ အပိုင်းအခြားအရ ပြန်တွက်လျှင် နှစ်ကာလ ရှည်အောင်မြင်သော မင်းသမီးကြီးတစ်ဦးဟု ဆိုနိုင်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း သူမဟာ ယခုအချိန်ထိ သွက်လက်ဖြတ်လက်သော ကာရိုက်တာများစွာမှာလိုက်ဖက်နေဆဲဖြစ်သော နုပျိုလွန်းသောမင်းသမီး ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတွက် မဆင့်က” အရွယ်တင်လွန်းသူ ဘယ်တော့မှ မအိုသော မင်းသမီး”ဟု ချီးမွမ်းလာတာဖြစ်ပြီး ခိုင်သင်းကြည်နှင့် ပတ်သက်သော အမှတ်တရဖြစ်ရပ်များကို ယခုလို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။“မခိုင်လေးနဲ့က သားသားမင်းသန့်တစ်သက်ပေါ့ .. သားသားကိုယ်ဝန် ရှိတဲ့အချိန်မှာမခိုင်လေးက မင်းသမီး စလုပ်တာ.. မဆင့်ဆီကို ရောက်လာတယ် ပြီးတော့ ဦးဇင်ရော်မောင်မောင်နဲ့ သူဇာတ်ကားစရိုက်တယ်..”အမှတ်တရတွေကလည်း အများကြီးပဲ သူနဲ့က.. အရှေ့မှာတော့ တော်တော်များများ ဆုံဖြစ်တာပေါ့ နောက်ပိုင်းကျတော့မှာသာ နည်းနည်းနည်းပါးပါး ဝေးသွားတာ ကားရိုက်မှာ သိပ်မဆုံဖြစ်တော့တာပေါ့..ဒါပေမယ့်အပြင်မှာကျတော့တကယ့်ညီအစ်မ သားအမိ မိသားစုလိုပဲ.. သူ့ရဲ့ခင်မင်မှုက လုံးဝမပြောင်းလဲဘူး ဒီအတိုင်းပဲ မခိုင်လေးက အရင်စထဲကဒီအတိုင်းပဲ..အရင်တုန်းကဆို ရှုတင်တွေ အတူတူသွားကြတယ် ပြီးတော့ မခိုင်လေးက ဟာသတွေ သိပ်ပြောတာ.. မဆင့်တို့က ရယ်ပေါ့. သွားရလာရတာ သိပ်ပျော်တာ..အဓိကက ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပျော်တာပေါ့.. ရန်လေး(ရန်အောင်)တို့ မခိုင်လေးတို့နဲ့ တဖွဲ့ထဲကျတယ်ဆိုရင် တဝါးဝါး တဟားဟားနဲ့ အစားအသောက်ကလည်း ညီကြတယ်”ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့သလိုယခုလို မြိတ်ဒေသထွက်စားသောက်ကုန်တွေ ရောင်းနေချိန်မှာလည်း “မဆင့်တို့အိမ်နားမှာက မခိုင်လေး ခိုင်သင်းကြည်ရှိတယ်လေ.
မခိုင်လေးဆီကို အစားအသောက်တွေပို့ အ စားအသောက်ပိုင်းက သူက ကျွမ်းတယ်လေ.. မြည်းပေးပါအုံး ဘာလိုတယ်ဆိုတာကို သူက အကြံပေးတယ်။ကိုယ်ကြိုက်တာနဲ့ ဝယ်သူအကြိုက် ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ရန်လေးဆီလည်း ပို့၊ ရန်လေးရေ ဒါလေး လုပ်ထားတယ် မြည်းပေးပါအုံးဆိုပြီး သူတို့နှစ်ယောက်က အစားအသောက် အရမ်းကျွမ်းတာဆိုတော့အကြံပြုခိုင်းရတာ. .သူတို့ကလည်း ဒါကောင်းတယ်.. ဒါလိုသေးတယ်ဆိုပြီး အဲ့လိုမျိုးတွေ အကြံပြန်ပြုပေးကြ ပြောပေးကြတယ်” ဆိုပြီး ရန်အောင်၊ခိုင်သင်းကြည် တို့နဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ကြည်နူးစရာ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကို ပြောပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ နှစ်ကာရှည်ကြာအောင် ချစ်ခင်စည်းလုံးကြတဲ့ ဝါရင့် အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြသော မင်းသားကြီးရန်အောင်မင်းသမီးကြီးမေသန်းနုနဲ့ မင်းသမီးခိုင်သင်းကြည်တို့ရဲ့ အနုပညာမောင်နှမတွေရဲ့ဘဝကတော့ တကယ့်ကို ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စရာ ပါပဲနော်။
ဖတ်ရှု့အားပေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့ထဲမှာကော ကိုရန်လေး မဆင့်နဲ့ မခိုင်လေးတို့ရဲ့ ဖန်တွေပရိသတ်တွေ ပါတယ်ဆိုရင် မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်ဒါနဲ့ ပရိသတ်ကြီးရဲ့မအိုသောမင်းသမီးဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းချက်ဟာ ထင်ထားသလိုဖြစ်ခဲ့လား မှန်လား မှားလား ပြောခဲ့ကြပါအုံးနော်. .အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ဘယျတော့မှမအိုတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျအကွောငျး ခြီးမှမျးပွောပွလာတဲ့ မသေနျးနု
အနုပညာလောကမှာ ဆယျစုနှဈမြားစှာ ဖွဈသနျးကာ နှဈကာလရှညျကွာအောငျ ဂုဏျအရှိနျမမှေးမှိနျသှားဘဲ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျတဈဦးအနေ ရပျတညျနနေိုငျဖို့ဆိုတာ တကယျ့ကို မလှယျပါဘူးနျော။နှဈပေါငျးမြားစှာအောငျမွငျမှုသရဖူ ဆောငျးနိုငျသူတှေ ဟာ လကျခြိုးရေ လို့ရတဲ့အရအေတှကျသာ ရှိနခေဲ့ပွီး ထိုသူတှထေဲမှာတော့ ဝါရငျ့သရုပျ ဆောငျ အကယျဒမီမြားရှငျ မငျးသမီးခြောကွီး မသေနျးနုဟာ တဈဦးအပါအဝငျဖွဈပါတယျနျော။
မဆငျ့(ခ)မသေနျးနုဟာဆိုရငျ ငယျရှယျနုပြိုစဉျ အခါတုနျးကလညျး ခြောမောလှပတဲ့ ရုပျရညျလေးနဲ့အညီ မငျးသမီးခနျးတှမှော ပီပွငျစှာသရုပျ ဆောငျနိုငျခဲ့သူဖွဈပွီး အ သကျအရှယျတဈခုရောကျလာတဲ့ အခါမှာလညျးအမခေနျးတှမှောပိုငျနိုငျစှာ သရုပျဖျောနိုငျခဲ့လို့ အကယျဒမီမြားရှငျ ဆိုတဲ့ ဂုဏျထူးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျလာခဲ့သူတဈဦး ဖွဈတယျလို့ဆိုလာမယျဆိုရငျ ငွငျးဆိုမယျ့သူ မရှိလောကျပါဘူးနျော။
ပွီးခဲ့နှဈတှတေုနျးက လူမှုရေး ငှရေေးကွေးရေး ကိစ်စမြားနဲ့ရှုပျထှေးကာ ခကျခဲခဲ့ရတဲ့ မသေနျးနုဟာ ယခုအခါမှာတော့ “ရှဆေငျ့”ဆိုတဲ့အမညျတံဆိပျနဲ့ မွိတျဒသေထှကျ လကျ ဆောငျပစ်စညျးရောငျးဝယျရေးဆိုငျ ဖှငျ့လှဈကာ ဦးစီးလုပျကိုငျလြှကျ ရှိပါတယျ။ ယနမှေ့ာတော့ ရုပျရညျခြောမောလှပလှနျးပါတယျ ဆိုတဲ့အကယျဒမီမြားရှငျ မသေနျးနုကိုယျ တိုငျက “ဘယျတော့မှ မအိုသော မငျး သ မီး” ဆိုပွီး နာမညျကွီး မငျးသမီးတဈလကျကို ခြီးမှမျးပွောဆိုလာခဲ့ပါတယျ။
မသေနျးနုကိုယျတိုငျက အရှယျတငျလှနျးတယျလို့ ဖှငျ့ဟခြီးမှမျး လာရတဲ့ မငျးသမီးဟာ ဘယျသူဖွဈမလဲပရိသတျကွီး စိတျ ဝငျစားကာ သိခငျြနမေိကွမယျ ထငျပါတယျနျော။ သူကတော့ ပရိသတျရဲ့ အခဈြတျော အသညျးစှဲ မငျးသမီးခြောတဈဦးပဲ ဖွဈပွီးသူမဟာ မညျသို့သောဇာတျရုပျကိုမဆို ပိုငျ နိုငျစှာ သရုပျဆောငျနိုငျသူတဈဦးဖွဈကာ အထူးသဖွငျ့ပရိသတျတှေ ပို၍ သတိထားသဘောကြ နှဈခွိုကျရသော သူမနဲ့အံဝငျဂှငျကဖြွဈလှနျးသော ဇာတျရုပျကတော့ ခပျစှာစှာ ခပျသှကျသှကျ ရှပျပွာပွာပုံစံဇာတျရုပျမြိုးဖွဈပွီးထိုဇာတျရုပျမြိုးမှာတော့ ပွိုငျဖကျမရှိ တဖကျကမျးခတျသူတျောလှနျးတဲ့ဝါရငျ့မငျးသမီးဖွဈပါတယျ။
ကဲ ပရိသတျကွီး ဒီလောကျဆိုရငျ ခနျ့မှနျးသိ ရှိ လောကျပွီး ထငျပါတယျနျော ပရိသတျကွီးရဲ့စိတျထဲက အဖွနေဲ့ မသေနျးနုပွောတဲ့ မအိုသောမငျးသမီး ထပျတူကကြ မကြ ကွညျ့လိုကျရအောငျနျော။ဟုတျပါတယျ..မဆငျ့ရညျညှနျးပွောဆိုလာတဲ့ မငျးသမီးကတော့မခိုငျလေး ချေါ ခိုငျသငျးကွညျပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတို့ရဲ့အသညျးကြျော သရုပျဆောငျမငျးသမီး ခိုငျသငျးကွညျဟာဆိုရငျလညျးဆယျစုနှဈ၂ခုစာမက သရုပျဆောငျလောကမှာ ဖွတျသနျးအောငျမွငျ လာခဲ့သော မငျး သ မီးတဈဦးဖွဈကာ သရုပျဆောငျပိုငျးမှာလညျး စှယျစုံပိုငျနိုငျသူ ဖွဈသဖွငျ့ အကယျ ဒမီဆုတှေ ထိုကျတနျစှာ သိမျးပိုကျထားနိုငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့အနုပညာ ဖွတျသနျးမှုကာလ အပိုငျးအခွားအရ ပွနျတှကျလြှငျ နှဈကာလ ရှညျအောငျမွငျသော မငျးသမီးကွီးတဈဦးဟု ဆိုနိုငျပွီ ဖွဈသျောလညျး သူမဟာ ယခုအခြိနျထိ သှကျလကျဖွတျလကျသော ကာရိုကျတာမြားစှာမှာလိုကျဖကျနဆေဲဖွဈသော နုပြိုလှနျးသောမငျးသမီး ဖွဈပါတယျ။
ထို့အတှကျ မဆငျ့က” အရှယျတငျလှနျးသူ ဘယျတော့မှ မအိုသော မငျးသမီး”ဟု ခြီး မှမျးလာတာဖွဈပွီး ခိုငျသငျးကွညျနှငျ့ ပတျ သကျသော အမှတျတရဖွဈရပျမြားကို ယခုလို ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။“မခိုငျလေးနဲ့က သားသားမငျးသနျ့တဈသကျပေါ့ .. သားသားကိုယျဝနျ ရှိတဲ့အခြိနျမှာမခိုငျလေးက မငျး သ မီး စလုပျတာ.. မဆငျ့ဆီကို ရောကျလာတယျ ပွီးတော့ ဦးဇငျရျောမောငျမောငျနဲ့ သူဇာတျ ကားစရိုကျတယျ..”အမှတျတရတှကေလညျး အမြားကွီးပဲ သူနဲ့က.. အရှမှေ့ာတော့ တျော တျောမြားမြား ဆုံဖွဈတာပေါ့ နောကျပိုငျးကတြော့မှာသာ နညျးနညျးနညျးပါးပါး ဝေးသှားတာ ကားရိုကျမှာ သိပျမဆုံဖွဈတော့တာပေါ့..ဒါပမေယျ့အပွငျမှာကတြော့တကယျ့ညီအဈမ သားအမိ မိသားစုလိုပဲ.. သူ့ရဲ့ခငျ မငျမှုက လုံးဝမပွောငျးလဲဘူး ဒီအတိုငျးပဲ မခိုငျလေးက အရငျစထဲကဒီအတိုငျးပဲ..အရငျတုနျးကဆို ရှုတငျတှေ အတူတူသှားကွတယျ ပွီးတော့ မခိုငျလေးက ဟာသတှေ သိပျပွောတာ.. မဆငျ့တို့က ရယျပေါ့. သှားရလာရတာ သိပျပြျောတာ..အဓိကက ကိုယျ့ရဲ့လုပျ ဖျောကိုငျဖကျအနနေဲ့အဆငျပွတေယျဆိုတော့အလုပျလုပျရတာ ပိုပြျောတာပေါ့.. ရနျလေး(ရနျအောငျ)တို့ မခိုငျလေးတို့နဲ့ တဖှဲ့ထဲကတြယျဆိုရငျ တဝါးဝါး တဟားဟားနဲ့ အ စားအသောကျကလညျး ညီကွတယျ”ဆိုပွီး ပွောလာခဲ့သလိုယခုလို မွိတျဒသေထှကျစားသောကျကုနျတှေ ရောငျးနခြေိနျမှာလညျး “မဆငျ့တို့အိမျနားမှာက မခိုငျလေး ခိုငျသငျးကွညျရှိတယျလေ.
မခိုငျလေးဆီကို အစားအသောကျတှပေို့အ စားအသောကျပိုငျးက သူက ကြှမျးတယျလေ.. မွညျးပေးပါအုံး ဘာလိုတယျဆိုတာကို သူက အကွံပေးတယျ။ကိုယျကွိုကျတာနဲ့ ဝယျသူအကွိုကျ ဘာတှလေိုအပျတယျဆိုတာကို ရနျလေးဆီလညျး ပို့၊ ရနျလေးရေ ဒါလေး လုပျထားတယျ မွညျးပေးပါအုံးဆိုပွီး သူတို့နှဈယောကျက အစားအသောကျ အ ရမျးကြှမျးတာဆိုတော့အကွံပွုခိုငျးရတာ. .သူတို့ကလညျး ဒါကောငျးတယျ.. ဒါလိုသေးတယျဆိုပွီး အဲ့လိုမြိုးတှေ အကွံပွနျပွုပေးကွ ပွောပေးကွတယျ” ဆိုပွီး ရနျအောငျ၊ခိုငျသငျးကွညျ တို့နဲ့ ခဈြခဈြခငျခငျ စညျးစညျးလုံးလုံးနဲ့ ကွညျနူးစရာ ဆကျဆံရေးအခွေ အနကေို ပွောပွလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ နှဈကာရှညျကွာအောငျ ခဈြခငျစညျးလုံးကွတဲ့ ဝါရငျ့ အနုပညာရှငျတှဖွေဈကွသော မငျးသားကွီးရနျအောငျမငျးသမီးကွီးမသေနျးနုနဲ့ မငျးသမီးခိုငျသငျးကွညျတို့ရဲ့ အနုပညာမောငျနှမတှရေဲ့ဘဝကတော့ တကယျ့ကို ကွညျနူးဝမျးမွောကျစရာ ပါပဲနျော။
ဖတျရှု့အားပေးနကွေတဲ့ ပရိသတျကွီးတို့ထဲမှာကော ကိုရနျလေး မဆငျ့နဲ့ မခိုငျလေးတို့ရဲ့ ဖနျတှပေရိသတျတှေ ပါတယျဆိုရငျ မှတျ ခကျြလေးတှေ ရေးပေးသှားကွပါအုံးနျောဒါနဲ့ ပရိသတျကွီးရဲ့မအိုသောမငျးသမီးဟာ ဘယျသူလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးခကျြဟာ ထငျထားသလိုဖွဈခဲ့လား မှနျလား မှားလား ပွောခဲ့ကွပါအုံးနျော. .အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျနျော။
Previous Article မိခငျအတှကျ ငှတေဈပွားမှမထုတျတဲ့ သားဖွဈသူရဲ့ စိတျသဘောထားအမှနျကို မေးကွညျ့လိုကျရာ ဆရာဝနျကွီး မကျြရညျကလြပွေီ
Next Article ကိုယျဝနျဆောငျနသေော မိနျးမဖွဈသူနဲ့အတူ သောကတှေ ဝမြှေခံစားပွီး ကိုယျဝနျဆောငျ ဝတျစုံပွညျ့နဲ့ ဓာတျပုံ ယှဉျတှဲ ရိုကျခဲ့သော ခဈြတကျလှနျးသူ အမြိုးသား